Anogovera mvura → Chikoro • Yunivhesiti • Kindergarten • Warsaw
Iwe unoda here mvura inogovera kuchikoro, kindergarten kana kuyunivhesiti? Iyo kambani yeWater Point inopa dzisiri-cylinder mvura dzinogadzira mvura, vanonwa doro, iro sosi yevatungamiriri venyika mumabhangi, avo isu tiriga takaparadzira muPoland.
Munguva pfupi yapfuura, mhando mvura kuwanikwa kwemvura muPoland kuri kuita zvirinani. Mutemo wePoland uye mitemo yeEU inoda kuchengetedzwa kwemaitiro akanyanya emvura yekunwa. Kana pane kusava nechokwadi, zvinokwanisika kuodha mhando yekuyedzwa kwemvura inoyerera kubva pombi yedu kunharaunda yepasipo yekuchenesa uye yepachirwere.
Vazhinji uye vazhinji vanhu vanoratidzawo pro-hutano kuziva, izvo zvinoreva kuti isu hanya zvakanyanya nezvatinonwa. Miti yekurapa kwemvura yakaiswa mudzimba dzakawanda, kana mafirita uye vagadziri vemvura.
Kubva munaGunyana 1, 2015, zvikoro zvese zvakarambidzwa kutengesa chikafu chisina hutano, kusanganisira zvinwiwa zvinotapira. Nekudaro, zvikoro zvine chisungo chekupa vadzidzi mvura yekumwa, inova inonwiwa yakanyanya kuvanhu.
Ndokusaka zvakakosha kuve nechokwadi kuti, kwete chete kumba asiwo kunze kwayo, vana nevachiri kuyaruka vanokwanisa kuwana nyore mvura yakakodzera yemhando: yakagwinya, yakachena uye inonaka.
Zvinotendwa kuti vana vemuchekeche, vadzidzi vechikoro uye vadzidzi veyunivhesiti vanofanirwa kuwana mukana wekugara vachinwa mvura munzvimbo yekufunda, kwavanopedza maawa akawanda masikati. Zvakakodzera, mvura iyi inofanira kuve yakasununguka uye nyore nyore kuwanikwa. Makambani anogadzira vanonwa mvura vanogadzira vanouya kuzopesana nezvishuwo izvi. Midziyo yakadaro inogona kuiswa munzvimbo iri nyore muchikoro chimwe nechimwe. Vana nevachiri kuyaruka vanogona kuzvishandisa pese panoshaikwa, ndizvozvo, panguva yekuzorora mukirasi kana mushure mezvidzidzo zvemuviri. Kugara uye kusingagumi kupinda kwemvura yakachena, yakachena uye inonaka mvura ichagonesa chaiyo hydration yemuviri uye zvakare ichakubvumidza kuti udzidze maitiro ekudya akakodzera.
Kunwa matsime emvura, zvitubu uye marudzi ese evanomwa, ayo anogona kuiswa munzvimbo dzidzo munzvimbo dzakanyanya nyore, anobatsira kupa vadzidzi mvura yakanaka uye inonaka.
Inonwiwa mvura yekunwa inofanirwa kuiswa munzvimbo inowanikwa nyore nyore: mukirasi, mukoridho, mukamuri yechikoro kana mukamuri yekuvharira iri padyo nenzvimbo yekutandarira, inova nechokwadi chekuwana nyore mvura yemhando yepamusoro. Midziyo inoitirwa zvikoro ine kuchengetedzeka kwakakosha kudzivirira kushomeka kwemvura nevana.
Kufunga kuti iyo huru sosi yemvura kune mwana inofanira kunge yakanaka mvura, vanonwa mvura vanogadzira vanozadzisa ichi fungidziro.
Iyo yemazuva ano disenser inoita kuti kristall yakajeka mvura inowanikwa nyore, apo ichideredza mari yekupa mukana wekuwana mvura yekunwa yevadzidzi. Mukana wekuwedzera zvakare kutarisira nharaunda.
Mvura kubva kune disenser iri mukokorodzari, chikoro kana yunivhesiti ine yakasarudzika kunaka uye kunaka uye inobvumidza iwe kutungamira hupenyu hune hutano uye chimiro chimiro chekunwa mvura uye kudya zvine hutano pakati pevechidiki.
Sezvo vana vachifanira kunwa anenge malita maviri emvura pazuva, mhinduro yakanakisa iyi ndeyekuisa mvura yekumwa mvura mune imwe neimwe dzidzo, munzvimbo dzinoverengeka, kuitira kuti mvura iwanikwe nyore kune vadzidzi vese.
mvura yemahara kuchikoromvura yemahara kuchikorokuwanikwa kwemvura kuchikoromvura inogovera vanayechikoro mvura inogoveradzidzotsime zvitubu kuchikorovanonwa muzvikorovanonwa mvura yezvikoromvura yevana muzvikoromvura kuyunivhesitimvura yechikorotapa mvura kuchikoroSpas yemvura yezvikorochikoro mvura chitubu